World News | SAHAN ONLINE - Part 91
Maraykanka oo Go’aan ka Gaaraya Qorshe Tababarayaal Loogu dirayo dalka Ciraaq
Madaxweynaha dalka Maraykanka ee Brack Obama ayaa Todobaadkan go'aan ka gaari doona qorshe boqolaal Tababarayaal Milateri Maraykan ah oo dheeri ah loogu dirayo dalka Ciraaq. Talaadadii lasoo … [Read more...]
Madaxweynaha Dalka Maraykanka oo ka qeybgalaya Shirka Wadamada G7 ee ka dhacaya dalka Jarmalka.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Iyo Chancellorka dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa kawada hadlaya cuna qabateynta dhaqaale ee saaran dalka Ruushka. Sidoo kalena aysan dalka Ruushka dibcin heshiiskii … [Read more...]
Tahriibayaal Gaarayey 3.400 qof oo Laga Soo Badbaadiyey Xeebaha dalka Liibiya
Ciidamada Badda ee Midowga Yurub ayaa Xeebaha dalka Liibiya kasoo badbaadiyey Tahriibayaal doonayey iney galaan dalalka Yurub kuwaasoo gaarayey 3.400 qof. Hawlgallo ay qaadeen afar iyo labaatankii … [Read more...]
Ururka ISIS oo dishay Rag ay ku sheegtay Iney ahaayeen Jaasuusiin
Ururka Daacish ayaa Labaatan nin ku dilay magaalada Tadmur oo ah magaalo Taariikhi ah oo kutaala dalka Siiriya,waana magaalo ku jirta gacanta Ururka Daacish. Ragan ay dileen Daacish ayey ku … [Read more...]
Madaxweyinihii hore Masar Maxamed Mursi oo dil Lagu Xukumay
Madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi ayaa maxkamad kutaala dalkiisa xukun dil ah ku riday ,waxaa lala xukumay eedeysanayaal kale oo kor u dhaafaya ilaa 100 qof. Xukunka lagu riday … [Read more...]